Khuphela inkqubo yoyilo lweeteki | Iindaba zeGajethi
Khuphela inkqubo yoyilo lweeteki
U-Eder Esteban | | software
Ukuba uthanda ukuzenzela ezakho iimpahla okanye ufuna ukuba nezakho iimpahla ezizezakho, kukho inkqubo enokusetyenziselwa zenzele ezakho iihempe zepolo.
Kulula ukufumana, ukusuka khuphela, kunye nokufaka. Ukongeza, le nkqubo ikuvumela ukuba uyile ifashoni yakho kunye neemodeli ze3D. Yinkqubo apho unokwenza imodeli yakho ngokwezifiso, nokuba kukutshintsha umbala weenwele, izithambiso, phakathi kwezinye izinto; kwaye ukongeza ekubeni nakho ukukhetha uhlobo lwempahla, iimodeli, imibala, iipateni, njl. Yinkqubo eluncedo kakhulu kwabo bantu bafuna ukuzenzela ezabo izikipa, nokuba zezabo, zamalungu osapho, ukuba bazithengise okanye babelane ngazo.
Konke oku kunye nezinye izinto esinokuzifikelela, enkosi Ingcali yeFashoni eyiyo, oko ikukuthi mahala kwaye iluncedo kakhulu kwezi meko. Olunye lweempawu zokuqaqambisa le nkqubo kukuba ikwi español ke ayizukuba lula ukuqonda eyakho ukusebenza kanye ukuba ngaphakathi kuyo.
1 IiFowuni zokusebenza
2 Iinkqubo zekhompyuter
3 Amaphepha akwi-Intanethi
4 Uyenza njani i-t-shirt
5 Kuxabisa malini ukwenza i-t-shirts?
Ukuyila isikipa yinto esinokuyenza nakwiselfowuni. Kukho izicelo ezenza ukuba oku kwenzeke, ke lolunye ukhetho olulungileyo lokuqwalaselwa, kuba kubasebenzisi abaninzi kulula kakhulu ukwenza oku kwifowuni yabo. Kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo kuGoogle Play, enokuba nomdla woku.
Eyokuqala uyilo kwaye uprinte isikipa sakho. Ukongeza, ikwavumela ukuba wenze ifayile okanye ifomathi kamva eya kuthi ibe nakho ukuprintwa kamva, ukuze isincede kule nkqubo ngendlela ephawulekayo. Uyilo lwe-app lulula kwaye lusebenza kakuhle. Inokukhutshelwa simahla kuGoogle Play:
Yila kwaye uprinte isikipa sakho
Kwelinye icala sinoyilo lweT-shirt-iSnaptee, ekunokwenzeka ukuba yeyona yaziwayo kweli gqala. Isinika ithuba lokuyila i-t-shirt yesiko kwasekuqaleni. Siza kuba nakho ukukhetha le nto siyifunayo ngolu hlobo, ukusuka kwimibala, iipateni okanye kugqityiwe. Ke, ukuba noyilo lwakho kulula. Inokukhutshelwa simahla kwi-Android:
Uyilo lwe T-shirt-Snaptee
Umthuthukisi: Snaptee limited
Ukuba ukhetha ukuyila ihempe kwikhompyuter yakho, Kuyenzeka ukuba usebenzise ezinye iinkqubo. Ukusebenza kwabo kuyafana noko sinako kwi-app yefowuni, kuphela kule meko siya kuthi sisebenzise inkqubo kwikhompyuter. Bayasivumela ukuba siphumeze yonke inkqubo yoyilo lwesicelo, ukuze sonwabe kwi-100% yesikipa sakho.
Kule meko, ukhetho alubanzi kangako, nangona kukho inkqubo enomdla omkhulu, Yintoni uMenzi weT-Shirt yeDesktop. Le nkqubo iyakusivumela ukuba sizenzele ezethu ihempe ngokulula kwikhompyuter. Sinokwenza ngokwezifiso yonke into malunga noyilo, de sifumane le siyifunayo. Kulula ukuyisebenzisa kunye nenketho efanelekileyo yokuyijonga.
Olu khetho lukhule kakhulu ekuhambeni kwexesha. Sidibene no amaphepha amaninzi ewebhu apho angenza khona uyilo Ii-t-shirts ezizezakho. Yenza uphando kuGoogle ukubona ukuba zininzi iindlela onokukhetha kuzo malunga noku. Ukongeza, ukusebenza kuzo kuyafana, ngenxa yoko asizukuba neengxaki ezininzi kulo mba.
Enye yezona zidumileyo yiTespring, Yintoni esinokuyibona kule khonkco?. Kweli phepha siya kuba nakho ukwenza uyilo esilufunayo, sikhethe phakathi kwezitayile ezahlukeneyo zesikipa, senze imibala esifuna ukuyisebenzisa kunye nesicatshulwa esifuna ukusibeka kuso. Konke oku kuvumela i-100% yoyilo olwenzelwe wena. Ukongeza, kuxhomekeke kwizongezo esizongezayo, sinokubona ixabiso elithe ihempe liya kubiza.
I-T-shirtimedia, kule linki iyafumaneka, lolunye ukhetho olunokuthi luqwalaselwe kweli candelo lentengiso. Isinika ithuba lokwenza ii-t-shirts ngendlela esithanda ngayo. Iwebhusayithi elungileyo ukuba sizimisele ukwenza iiyunithi ezininzi, njengoko kunokuba kunjalo ukuba kungokwesiganeko esithile, umzekelo. Intuitive yokusebenzisa kunye namaxabiso amahle ngokubanzi.
I-Spreadshirt yiwebhusayithi yesithathu esele siyichazile, lolunye ukhetho olulungileyo lokujonga. Iya kusinika ithuba lokuyila uyilo esilufunayo kwizikipa. Ukongeza, yindawo ekulula ukuyisebenzisa, ekwaziyo ukwenza i-t-shirts kuzo zonke iintlobo zabantu (abantu abadala okanye abantwana). Sinokukhetha yonke into malunga nehempe, ezinje ngezixhobo. Kuvumelekile nokuba kwenziwe i-t-shirt yendalo, ngokuqinisekileyo inomdla kakhulu. Olukhetho olukhulu, ukuba ungandwendwela apha.
Uyenza njani i-t-shirt
Inkqubo ihlala ifana kuwo onke amaphepha ewebhu. Kuya kufuneka khetha imiba ethile kuqala, ezinje ngemathiriyeli esifuna ukuyisebenzisa kwihempe kunye nombala wayo. Ukuze umsebenzisi ngamnye angakhetha ukhetho olufunwayo. Kukho amanye amaphepha anemibala emininzi, kodwa ngokubanzi ayisiyongxaki.
Into eqhelekileyo kukuba ihlala ivumelekile ukwenza isicatshulwa esenzelwe umntu, kubandakanya ithuba lokukhetha ifonti. Sinokwazisa iifoto okanye iilogo kuyo, kwiimeko ezininzi kuya kufuneka siyilayishe kwikhompyuter, ke kubalulekile ukuba nefayile egciniweyo esifuna ukuyisebenzisa kule meko. Nangona uninzi lwee amaphepha okanye iinkqubo zikwanazo nezinto esinokuzisebenzisa, ukuba sifuna ukwazisa iimilo. Into yesiqhelo kukuba kuya kufuneka uhlawule isixa sezinto esizisebenzisayo.
Ngale ndlela, singalungiselela uyilo lwalehempe ukuthanda kwethu ngamaxesha onke. Nje ukuba sigqibile, kuya kufuneka sikhethe kuphela ubungakanani kunye neeyunithi esizifunayo kulehempe, kwaye ngenxa yoko siya kulazi ixabiso eliza kubiza olu luyilo lwesiko. Amaphepha amaninzi athambekele kumaxabiso asezantsi ukuba iiyunithi ezingaphezulu ziya-odolwe.
Kuxabisa malini ukwenza i-t-shirts?
Ukuyila i-t-shirts akubizi. Uninzi lwamaphepha ludla ngokuhamba kwimida enye, eziphakathi kwe-10 ukuya kwi-20 ye-euro. Nangona ixhomekeke kwizinto ezininzi, eziza kuba lixabiso lokugqibela leshethi. Kwelinye icala, izinto esizisebenzisayo zinomdla, kuba ezinye zibiza kakhulu, ngakumbi ukuba sibheja ngehempe yendalo, njengoko ezinye iivenkile zisivumela.
Imibala inokuba nefuthe, kuba eminye imibala inzima ngakumbi ukuvelisa kwaye kukho amaphepha ahlawulisa ngaphezulu. Kodwa ahlala engumahluko omkhulu kule nkalo. Ekugqibeleni, izinto esizisebenzisayo, ezinjengeefoto, ii-icon, iilogo, njl.. Oku kuthetha ukuba ixabiso lehempe ekuthethwa ngalo linokuphakama. Amanye amaphepha abiza into nganye, ngelixa abanye besibiza kanye. Nganye inenkqubo yayo.
Ezi zinto zinegalelo kwixabiso lazo, kodwa musa ukuzenza zibize kakhulu. Ukuyila i-t-shirts yinto enokufikelela kuzo zonke iipokotho. Ke ngoko, ukuba ubucinga ukwenza uyilo lwakho, uyakubona ukuba yinto elula kwaye ayibizi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Khuphela inkqubo yoyilo lweeteki
Izimvo ezi-13, shiya ezakho
kakuhle inkqubo iya kuyisebenzisa. Enkosi.
ps ndifuna ukuyikhuphela ukuze nditsho ihempe
uyikhuphela njani le nkqubo undixelele i-xfa
Inkqubo inokukhutshelwa njani?
Isimo mzalwana sitsho
Ndidinga inkqubo yoyilo lweekgs ukuba yeyiphi inkqubo endinokuyisebenzisa ingeyiyo ifotoshop okanye hofmman
Phendula kwisimo sengqondo mzalwana
Cloudya: Eyona nkqubo yefowuni ilungileyo
Abo bajongene noThotho lweYonkis ekugqibeleni bonke bakhululwa